Alatsinainy 4 Aprily 2022
Fonosana Ny zava-pisotro misy alikaola mitambatra miaraka amin'ny foto-kevitra 'fonosana maloto », ny Melting Stone dia manome sanda tokana mifanohitra amin'fonosana alikaola. Raha tokony ho fanodinana fanokafana ara-dalàna, Melting Stone dia natao hanalefahana ny tenany rehefa mifandray amin'ny mari-pana avo lenta. Rehefa araraka amin'ny rano mafana fonosana misy alikaola, fonosana 'vita marbra' dia ho rava amin'izany fotoana izany, ny mpanjifa dia vonona ny hankafy ilay zava-pisotro miaraka amin'ny vokatra efa nataony manokana. Fomba iray vaovao ny mankafy ny zava-pisotro misy alikaola ary mankasitraka ny lanja nentim-paharazana.
Alahady 3 Aprily 2022
Cookbook Ny latabatra kafe Hongariana cookbook 12 Volana, nosoratan'ny mpanoratra mpanoratra Eva Bezzegh, dia natomboka tamin'ny Novambra 2017 avy amin'ny Artbeet Publishing. Lohateny zava-kanto kanto tsy manam-paharoa izay mampiseho salady an-tanety izay manasongadina ny tsiron'ny lazan-tsakafo maro eran-tany amin'ny fomba isam-bolana. Ny toko dia manaraka ny fiovan'ny vanim-potoana eo amin'ny takelaka sy ny natiora mandritra ny herintaona ao amin'ny 360pp misy fahazoan-dàlana amin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana sy ny sakafo mifanentana, ny tontolo eo an-toerana ary ny sarin'ny fiainana. Ankoatra ny maha-mpamorona resak'isa tsy misy dikany azy ireo dia manome toky ny fiainana zava-kanto maharitra.
Asabotsy 2 Aprily 2022
Robot Fanampiana Spoutnic dia robot mpanohana natao hanabeazana ireo akoho handry ao anaty boatiny. Mifoha ny lalany ary miverina amin'ny akanany izy. Raha ny tokony ho izy dia voatery mivezivezy ny tranobeny rehetra ny mpametaka isaky ny adiny na antsasaky ny adiny iray eo amin'ny tampon'ilay fandriana, mba hialana ireo akoho tsy atodiny amin'ny tany. Ilay robot Spoutnic autonomous kely dia mora mandalo eo ambanin'ny rojo famatsiana ary afaka mivezivezy amin'ny trano rehetra. Ny bateriny dia mitazona ny andro ary miverina ao anaty indray alina. Izy io dia manafaka ny mpamokatra amin'ny asa sarotra sy lava, mamela ny vokatra tsara kokoa ary mametra ny atin'ny decommissioned.
Ny Fonosana Kafe
Zoma 1 Aprily 2022
Ny Fonosana Kafe Ny famolavolana dia mampiseho tanana dimy samy hafa izay voasarika, aingam-panahy vita amin'ny vinaingitra sy tarehy toa ny gidro, izay samy maneho ny kafe hafa avy amin'ny faritra hafa. Eo amin'ny lohan'izy ireo dia satroka mahazatra sy mahazatra. Ny fanehoan-kevitr'izy ireo maloto dia manintona fahalianana. Ireny gidro goavambe ireny dia manondro kalitao, manintona ny sainy mahaliana amin'ireo mpibon-kafe izay mahaliana ny mampiavaka ny tsirony. Ny fanehoan-kevitr'izy ireo dia maneho ny fihetseham-po, fa mifangaro ihany koa amin'ny mombamomba ny kafe amin'ny kafe, malefaka, matanjaka, manjavozavo na malama. Tsotra ny endrika natao nefa mora maloto, kafe ho an'ny toe-javatra rehetra.
Alakamisy 31 Martsa 2022
Fitaratra Kognac Natao hisotro cognac ny asa. Voaroaka amin'ny studio fitaratra izany. Izany dia mahatonga ny tsirairay isaky ny takelaka fitaratra. Mora maka ny vera ary mahaliana avy amin'ny zoro rehetra. Ny endrik'ilay fitaratra dia maneho taratra maivana amin'ny zoro samihafa sy manome fahafinaretana fanampiny amin'ny fisotroana. Noho ny endrika kapoaky ny kapoaka, dia apetraho eo ambony latabatra ny fitaratra arak'izay tianao maniry ny ilany amin'ny andaniny roa. Ny anarana sy ny hevitra fonosin'ny asa dia mankalaza ny fahanterana amin'ny mpanakanto. Ny famolavolana dia maneho ny fihenan'ny fahanterana ary miantso ny fomba amam-panao ny fahanterana cognac hanatsara ny kalitao.
Alarobia 30 Martsa 2022
Oli Lovia Oliva Alatsinainy 16 Mey
Bridal Veil Ny Chandelier Alahady 15 Mey
Illusion Tranokala Asabotsy 14 Mey
Fonosana Cookbook Robot Fanampiana Ny Fonosana Kafe Fitaratra Kognac Care Fonosana Hoditra